Haweeney kubadda cagta u adeegsatay inay kaga hortagto guurka gabdhaha yaryar | Sahan Media Group
Aad ayey iigu fududeyd inaan Nairobi iska joogo oo aan ku shaqeysto sharciga aan bartay lacag badanna aan halkaa ka helo, oo weliba aan gato gaari qurux badan sida nooca Mercedes-Benz. Hasayeeshee waxaan doonayay inaan deegaankeyga dib ugu soo laabto.”
Taasi waa nolosha ay Faaduma Cabdulqaadir Aadan ku heli laheyd caasimadda Kenya. Taa badelkeedana waxa ay doorbidday inay diiradda saarto kubadda cagta – weliba deegaan dalkan ka mid ah oo ceeb looga arko in gabdhaha ay ka qeyb qaataan ciyaaraha.
“Jir ahaan ayaa la ii weerraray oo garoonkii ayaa la iga saaray,” ayey tiri Faaduma oo ka sheekaynaysa dadaalkeedii ugu horreeyay ee ay sameysay 10 sano ka hor, markaas oo ay magaalada Marsabit ee Waqooyiga Kenya ka aasaastay koox gabdhaha ah.
Image copyrightFATUMA ABDULKADIR ADAN
Image captionTartammadii kubadda cagta ee ugu horreeyay ayaa waxaa loogu talagalay in lagu soo afjaro colaadda bulshada ka dhextaagneyd
Faaduma ayaa 2003 waxa ay aasaastay Hay’adda Horumarinta Geeska Afrika ee loo yaqaan Hodi.
Kubadda cagta ayey u adeegsatay in ay ku soo jiidato quluubta dhalinyarada bulshada halkaa deggan, kaddib dagaal culus oo lagu baaba’ay oo 2005 halkaas ku dhexmaray dhowr qabiil oo halkaasi wada dega, dagaalkaas waxaa ku dhintay 100 qof.
“Si aad ugu biirto koox kubadda cagta waxa ay aheyd in qofku uu keeno qori AK-47 ah.” Ayey leedahay. Waxyar dhalinyaradii quryihii oo kaliya iskama aanay dhiginee sidoo kale waxa ay bilaabeen inay wada dheelaan iyagoo ku milmay dhalinyaro kale oo ka soo jeeda qabiillo ay isnecbaayeen.
Image captionIn gabdhaha ay dheelaan kubadda cagta ayaa waxa ay ceeb ka aheyd waqooyiga Kenya markii uu tartankan bilaabanayay 2008
“Markii hore caadi ayey iska aheyd in gabdhaha lagu guursado 13 ama 12 sanno,” ayey Faaduma sheegtay. “Maanta haddii aad guursato gabar 13 sanno jir ah, waxaa durbadiiba cabanaya gabdhaha iyo wiilasha iskuulka.”
Image captionFaaduma Gufra waxa ay sheegaysaa in kubadda cagta ay ka heshay kalsooni ay yoolka nolosheeda ku badeli karto
Hay’adda Hodi ayaa sidoo kale waxa ay qabataa kulamo wacyigelin ah oo ay kaga hadlayso ciyaaraha tartamada iyo weliba in gabdhaha wax la baro, sidoo kale Hodi waxa ay badanaa wax bartaa waalidiinta carruurtaas.
Kaddib markii ay wadatashiyo kala yeelatay imaamyada ayaa waxa ay dajisay qaabka ay u sameyn karto garoon kubadda cagta ah oo ay ku dheeli karaan gabdhaha Muslimiinta ah ee doonaya inay dheelaan, haatan waxa ay maamushaa koox gabdha ah oo ku dheela meel madarasa ah. “Weli ma aan rumaysni in anigoo nool aan heerkan gaarnay.”
Image captionDaawo: Gabar horumar ka gaartay ganacsiga Teknolojiyada
Iyadoo xubnaha hay’add Hodi ay la dhacsan yihiin qaabka ay u shaqeeyaan, ayaa waxaa la arki karaaba shaqada Faaduma ay ku badashay hab nololeedkii gabdhaha yar iyo rajada ay u abuurtayba.
Faaduma Gufra, waa 14 jir, waana gudoomiye ku xigeenka iskuulkeeda. Waxaa soo korisay hooyo garoob ah oo qoyskeeda iyada kaliya ayaa gabar ka ah. Waxa ay sheegaysaa in “Kubadda cagtu ay nolosheedii badashay.”
“Markii ugu horraysay aad ayaan u xishoonayay,” ayey tiri, “Hasayeeshee waxoogaa kaddib kubadda cagta ayaa I badashay. Sanado badan waalidiinta ayaanan gabdhahooda ku taageeri jirin dheesha kubadda cagta balse mustaqbalka markaan hooyo noqdo, waxaan doonayaa inaan gabdhaha ka caawiyo inaan gabdhaha gacan ka siiyo sidii ay kubadda ku dheeli lahaayeen.”
Faaduma sidoo kale waxa ay ka mid tahay shanta arday ee ugu sarreysa fasalkeeda – halkaas oo ah boos ay badanaaba qaataan wiilasha aadka u hadli yaqaan, waxaa sidaas noo sheegtay maamulaheeda, Marwo Kame Koto. “Tan iyo markii ay bilowday inay ka qeybqaadato tartanka kubadda cagta, Faaduma waa ay furfurantay oo waxaa sare u kacay natiijada ay keento iyo xirfadeeda hoggaankeedaba.”
“Dhammaan arrimahaasi waxaa lagu gaari karaa kubadda cagta,” Faaduma ayaa sidaas ku adkaysanaysa. “Gabdhaha ayey u suuragashay inay gudaha fasalka yool ku degsadaan oo ay ka gun gaaraan iyo sidoo kale gudaha garoommada kubadda cagta